Android P inogadziridzwa muna Nyamavhuvhu uye inogadzirisa zvikanganiso zvakati kuti zvekuchengetedza | Linux Vakapindwa muropa
Android P Nyamavhuvhu chengetedzo inogadziridza inogadzirisa akati wandei eazvichangobva kuwanikwa zvikanganiso zvekuchengetedza
Google yakaburitsa zvekare yekuchengetedza yekushandisa kwayo nharembozha yekushandisa. Ndezve iyo Nyamavhuvhu 2019 chengetedzo yekuvandudza yeApple P uye inosanganisira zvigamba 2019-08-1 uye 2019-08-5 izvo pamwe zvinogadzirisa zvikanganiso makumi maviri nenhanhatu zvekuchengetedza zvakawanikwa muiyo nguva yekumhanya yeApple, iyo multimedia fomati, fomati uye iyo Android inoshanda system, pamwe neBroadcom neQualcomm zvinhu. Chikanganiso chakakomba pane zvese chinokanganisa mashandiro.
Tingaverenga sei mu chiziviso yekutanga kwayo, «Kunyanya kuomarara kwezvikanganiso uku kwakakomba kudzivirirwa kwekuchengetedzeka muchikamu cheSystem icho chingabvumidze anorwisa ari kure kuti ashandise rakarongedzwa faira rePAC kuita kodhi yekumanikidza mune mamiriro ehurombo. Kuongororwa kwekuomarara kunoenderana nemhedzisiro yekushandisa kusagadzikana kunogona kuve pane chakakanganiswa mudziyo«. Mune mawonero angu, chinhu chakakomba zvakare icho iko kukanganisa kuri pamusoro kunogona kushandiswa kure.
Nyamavhuvhu 2019 Android P chengetedzo yekuvandudza, dzimwe nhau
Kunyatso kuvandudzwa uye zvigadziriso zvekuchengetedza zvese zvishandiso zvePixel, senge nenjodzi nhatu dzakagadziriswa muzvinhu zveQualcom, zvinosanganisira zvakavharwa (kwete yakavhurika sosi).
Kurara kwemaitiro ekuvandudza ePixel 3a uye Pixel 3a XL.
Iyo yekuisa masetingi eWiFi netiweki yakagadziridzwa paPixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a uye Pixel 3a XL.
Iyo Wi-Fi CaptivePortalLogin kugadzikana yakagadziridzwa zvakare.
Kufanana nezvakawanda zvinogadziridzwa kubva kuGoogle, pakati pazvo isu zvakare tine izvo zvewebhu browser uye yayo Chrome OS desktop desktop system, iyo Nyamavhuvhu yekuchengetedza yekuvandudza yeApple P yakatanga kuwanikwa ikozvino, zvinoreva kuti kuvhurwa kwayo kuri pamutemo, asi zvishoma nezvishoma kunosvika kune ese anoenderana zvishandiso
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Android P Nyamavhuvhu chengetedzo inogadziridza inogadzirisa akati wandei eazvichangobva kuwanikwa zvikanganiso zvekuchengetedza
Ko udev inotora nzvimbo pane yangu hard drive?
KDE uye GNOME Chikwata Kumusoro Kugadzira Iyo Nyowani Age Linux Desktop